Dibadbaxayaasha waxay weerareen bangiga Beirut, 'waxay xoreeyeen' $ 180K 'oo laga xaday' dadka reer Lubnaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Lubnaan » Dibadbaxayaasha waxay weerareen bangiga Beirut, 'waxay xoreeyeen' $ 180K 'oo laga xaday' dadka reer Lubnaan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Wararka Lubnaan • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qoraal ay soo dhigeen Facebook, Ururka Samafalka ee Banin waxay ku sheegeen inay 'soo ceshadeen' ilaa $ 180,000, taasoo ay ku andacooday in bangigu 'ka dhacay' dad masaakiin ah.
Dibadbaxayaasha waxay dalbanayaan helitaanka lacag 'laga dhacay' dadka reer Lubnaan.
Booliska ayaa loogu yeeray goobta si ay uga saaraan mudaaharaadayaasha dhismaha ayna ka xiraan wadooyinka hareerahooda.
Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay bangiga in seddex ka mid ah shaqaalihiisa ay ku dhaawacmeen fowdada.
Lubnaan Swiss Bank magaalada Beyruut waxaa galay 'daraasiin' mudaaharaadayaal careysan kuwaas oo dalbanayay in la helo tobanaan kun oo doolar 'oo laga dhacay' dadka reer Lubnaan.
Muuqaalo laga soo duubay xaafada Hamra ee caasimada Lubnaan Isniintii ayaa la sheegay inay muujinayeen dad weeraraya shaqaalaha bangiga isla markaana ka tuuraya dukumiintiyada bangiga daaqadaha dhismaha.
Boodhadh muujinaya farriimo sheeganaya in bangigu xaday lacagtii dadka ayaa sidoo kale la arki karaa iyaga oo sudhan iridda bangiga, iyo sidoo kale dad fara badan oo mudaaharaadaya dhismaha hortiisa.
Fiidiyowyo kale oo ay daabacday warbaahinta maxalliga ah ayaa u muuqday kuwa muujinaya dibad-baxayaal wareegaya bangiga isla markaana galaya qolalka kala duwan ee dhismaha.
Sida ay tabinayaan warbaahinta gudaha, dab ayaa sidoo kale ka kacay gudaha bangiga.
Bangiga Switzerland ee Lubnaan ayaa sheegay in NGO-ga is-sharaxay ee Banin Charity Association uu qabsaday laantiisa Xamra. Ururku wuxuu kaloo sheegtay mas'uuliyadda dhacdooyinkii Isniinta.
Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay bangiga in seddex ka mid ah shaqaalihiisu ay ku dhaawacmeen fowdada, oo uu ku jiro mid isbitaal la dhigay oo leh labo waji oo wajiga ah oo u baahan qalliin
"Qiyaastii boqol nin oo ka tirsan Ururka Samafalka ee Banin waxay qabsadeen dhismaha maamulka guud ee bangigeenna, iyagoo weeraraya shaqaalaheenna," ayaa lagu yiri qoraalka bangiga.
Bangiga ayaa sidoo kale sheegay in maamulayaasha laamaha loogu hanjabay rabshad hadii aysan lacagaha u wareejin dibada.
Natiijada go'doominta bangiga ee Isniinta, Ururka Bangiyada ee Lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in hay'adaha kale ee maaliyadeed ay xirnaan doonaan Talaadada si ay u muujiyaan isgarab taagga laanta go'doomisay.
Qalalaasaha iyo mudaharaadyada ka socda Lubnaan waxay noqdeen wax iska caadi ah maaddaama waddanku u sii siqday xiisad dhaqaale, oo ay uga sii dartay musuqmaasuq dowladda lagu eedeeyay, aafada, qalalaasaha siyaasadeed, iyo qaraxii ba'naa ee ka dhacay Dekedda Beirut bishii Ogosto ee la soo dhaafay.
Waddanku wuxuu kaloo la tacaalayaa gabaabsi weyn oo xagga cuntada iyo daawada ah.
Mudaaharaadyo dheeri ah ayaa la qabtay dhammaadkii usbuuca iyaga oo ka jawaabaya go'aanka dowladda ee ay ku sii jareyso qiimaha lacagta Lubnaan ee ka soo horjeedda dollarka.